အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုပါသလား (၆) | ABC Radio Australia
သြစတြေးလျမှ​ မြန်မာဘာသာနှင့်​ထုတ်လွင့်သည့်သတင်း၊​ မျက်မှောက်ရေးရာနှင့်​အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာများ
သြစတြေးလျမှ​ ခမာနှင့်​ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့်​ထုတ်လွှင့်သည့် ​သတင်း၊​ မျက်မှောက်ရေးရာနှင့်​အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ၊
သြစတြေးလျ၊ ​အာရှနှင့် ​ပစိဖတ်ဒေသတွင်း ​သတင်းများ၊ ​မျက်မှောက်ရေးရာနှင့်​ ဆွေးနွေးချက်များ၊
သြစတြေးလျမှ​ တွတ်ပိစင်ဘာသာဖြင့်​ထုတ်လွှင့်သည့် ​သတင်းနှင့် ​မျက်မှောက်ရေးရာ၊
သြစတြေးလျမှ​ ပြင်သစ်နှင့်​ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့်​ထုတ်လွှင့်သည့် ​သတင်းနှင့် ​မျက်မှောက်ရေးရာ၊
မြန်မာဌာန၏ ​ဝန်ဆောင်မှုများအား ​ရပ်တန့်လိုက်ပြီး ​အကြောင်းအရာများအား ​ဝဘ်ဆိုက်တွင် ​မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ http://ausp.lu/2fm5qSv တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ပင်မစာမျက်နှာ \_ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရန် \_ သင်ခန်းစာများ
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုပါသလား (၆)
အထွေထွေ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရန် - Radio Australia
Lesson 12 of 14ပြောင်းရန်
အင်္ဂလိပ်စာ ​​အသုံးအနှုန်းနဲ့ ​​ပတ်သက်ပြီး ​​မေးမြန်းလာတာတွေရှိတဲ့အတွက် ​​ဘာသာပြန် ​​ပေးလိုက်ပါတယ်။ ​​မေးစရာတွေ ​​ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ​​ABC ​​ရဲ့ ​​Learn ​​English ​​ကို ​​ဝင်ပြီး ​​မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ​​ဝဘ်ဆိုက်ကနေ ​​မေးနိုင်သလို ​​Learn ​​English ​​ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေလည်း ​​မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံက ​​Alubdullah ​​Mohammed ​​က ​​I'm ​​broke ​​ရဲ့ ​​အ ​ဓိ ​ပ္ပာယ် ​ကို ​​မေး ​ထား ​ပါတယ်။
I'm ​​broke ​​ရဲ့ ​​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​​ပိုက်ဆံမရှိခြင်းပဲ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥမမာ ​​-Sorry ​​I ​​can’t ​​go ​​to ​​the ​​movies, ​​I ​​am ​​broke ​​this ​​week ​​until ​​I ​​get ​​paid ​​on ​​Monday. ​​လို့ပြောရင် ​​'ဆောရီးပဲကွာ ​​ပိုက်ဆံမရှိလို့ ​​ရုပ်ရှင် ​​လိုက်မကြည့်နိုင်တော့ဘူး။ ​​ဒီတပါတ်အတွင်း ​​လုံးဝကို ​​ဘိုင်ပြတ်နေတယ်။ ​​လာမယ့် ​​တနင်္လာနေ့မှာ ​​အလုပ်က ​​ငွေဝင်မှာ' ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။ ​​
နောက်ဥပမာကတော့ ​​- ​​Her ​​business ​​failed ​​and ​​she ​​lost ​​her ​​house. ​​She’s ​​totally ​​broke. ​​လို့ပြောရင် ​​' ​​သူမရဲ့ ​​စီးပွားရေး ​​မအောင်မြင်လို့ ​​အိမ်ပါ ​​ဆုံးရှုံးရပြီ။ ​​သူအခုဆိုရင် ​​လုံးဝ ​​ပိုက်ဆံမရှိဘူး" ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ​​Hassan ​​Khan ​​ကလည်း ​​'unlikely' ​​ဆိုတဲ့ ​​စကားလုံးကို ​​ဘယ်လို ​​သုံးနိုင်သလဲလို့ ​​မေးထားပါတယ်။
Unlikely ​​ဆိုတာ" ​​ဖြစ်ဖို့ ​​အလားအလာနည်းခြင်း" ​​ပဲ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​​- ​​"သူဒီ ​​စာစီ ​​စာကုံးကို ​​အချိန်မှီ ​​ပြီးမှာ ​​မဟုတ်ဘူး။ ​​သူဒီမနက်မှ ​​စရေးတာ" ​​လို့ ​​ပြောချင်ရင် ​​She ​​is ​​unlikely ​​to ​​get ​​the ​​essay ​​in ​​on ​​time, ​​she ​​only ​​started ​​this ​​morning. ​​လို့ ​​ပြောနိုင်ပါတယ်။
မျှော်လင့်မထားတာကိုလည်း ​​unlikely ​​လို့ ​​သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ​​- ​​They ​​are ​​an ​​unlikely ​​pair, ​​but ​​it ​​looks ​​like ​​they ​​have ​​become ​​the ​​best ​​of ​​friends. ​​လို့ပြောရင် ​​' ​​သူတို့နှစ်ယောက် ​​တည့်မယ်လို့ ​​မထင်ခဲ့ဘူး ​​ဒါပေမဲ့ ​​သူတို့က ​​အကောင်းဆုံး ​​သူငယ်ချင်းတွေတောင် ​​ဖြစ်လာနေကြတဲ့ပုံပဲ' ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
အာဖဂန် ​​နစ္စတန်နိုင်ငံက ​​Murad ​​Hamid ​​ကလည်း ​​backpack ​​ရဲ့ ​​အဓိပ္ပာယ်ကို ​​မေးလာပါတယ်။
backpack ​​ရဲ့ ​​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​​'ကျောပိုးအိတ်' ​​ပဲ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
သေးငယ်တဲ့ ​​ကျောပိုးအိတ်တွေကို ​​နေ့စဉ်သုံး ​​ပစ္စည်းတွေ ​​ထည့်လေ့ရှိပြီး ​​ကျောပိုးအိတ် ​​အကြီးတွေကိုတော့ ​​တောင်တက်ဖို့ ​​ဒါမှမဟုတ် ​​camping ​​အားလပ်ရက်တွေ၊ ​​ခရီးရှည် ​​ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ​​သုံးပါတယ်။
ကျောပိုးအိတ်တွေကို ​​လူငယ်တွေ ​​ပိုအသုံးပြုကြပြီး ​​ခရီးသွားသေတ္တာတွေနဲ့ ​​အစားထိုး ​​အသုံးပြုကြတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
Backpack ​​ကို ​​ကြိယာအနေနဲ့ ​​အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ​​' ​​ခရီးသွားလာခြင်း' ​​လို့ ​​ပြောရမယ်လို့ ​​ထင်ပါတယ်။
ဥပမာ ​​-She ​​is ​​backpacking ​​around ​​Australia ​​this ​​summer. ​​လို့ပြောရင် ​​'သူက ​​ဒီနှစ် ​​နွေရာသီအတွင်း ​​သြစတြေးလျနိုင်ငံ ​​တစ်ဝှမ်းကို ​​ခရီးထွက်ဖို့ ​​ရှိတယ်" ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
Backpacker ​​ကတော့ ​​ဈေးနှုန်း ​​သက်သာတဲ့ ​​နေရာတွေမှာ ​​တည်းခို ​​လည်ပတ်တဲ့ ​​ခရီးသွားတွေ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​​-That ​​area ​​of ​​town ​​is ​​popular ​​with ​​backpackers ​​in ​​summer. ​​လို့ပြောရင် ​​'မြို့ရဲ့ ​​အဲဒီနေရာကတော့ ​​နွေရာသီမှာ ​​ဈေးနှုန်းသက်သာမှုကို ​​ရှာတဲ့ ​​ခရီးသွားတွေနဲ့ ​​ပြည့်နှက်နေတတ်တယ်" ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
Backpaker's ​​ကတော့ ​​အဲဒီလို ​​ဈေးနှုန်းသက်သာမှုကို ​​ရှာတဲ့ ​​ခရီးသည်တွေ ​​နားခိုရာ ​​နေရာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
Backpacker's ​​hostel ​​အစား ​​Backpaker's ​​လို့ ​​အတိုကောက် ​​ခေါ်လိုက်တာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​​-There’s ​​a ​​backpacker’s ​​next ​​door ​​so ​​it ​​is ​​quite ​​noisy ​​at ​​night. ​​လို့ပြောရင် ​​" ​​အဲဒီနားမှာ ​​ဈေးနှုန်းသက်သာမှုကို ​​ရှာတဲ့ ​​ခရီးသွားတွေ ​​တည်းခိုတဲ့ ​​နေရာရှိလို့ ​​ညညဆို ​​တော်တော့ကို ​​ဆူညံတယ်" ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ​​တည်းခို ​​စရာနေရာက ​​လူငယ် ​​ခရီးသွားတွေ ​​တည်းခိုလေ့ရှိပြီး ​​အများအားဖြင့် ​​အိပ်ရာ၊ ​​အိမ်သာ၊ ​​ရေချိုးခန်းကို ​​သူများတွေနဲ့ ​​မျှဝေ ​​သုံးရတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။ ​​အဲဒါကြောင့် ​​ဈေးနှုန်း ​​ပိုသက်သာပြီး ​​လူငယ်တွေ ​​ပိုမို ​​တည်းခိုလေ့ရှိပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား ​​နိုင်ငံက ​​Imam ​​L ​​Furquon ​​ကတော့ ​​steam ​​နဲ့ ​​simmer ​​တို့ရဲ့ ​​ခြားနားမှုအကြောင်း ​​ရှင်းပြဖို့ ​​ပြောလာပါတယ်။
Steam ​​ကတော့ ​​'ပေါင်းခြင်း' ​​ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူနေတဲ့ ​​ရေအိုးပေါ်ကို ​​တခုခု ​​ခံပြီး ​​အငွေ့တွေနဲ့ ​​ပေါင်းတာကို ​​ဆိုလိုတာပါ။
ဥပမာ ​​- ​​I ​​read ​​that ​​it ​​is ​​healthier ​​to ​​steam ​​vegetables ​​rather ​​than ​​boil ​​them. ​​လို့ပြောရင် ​​' ​​ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ​​ပြုစားတာထက် ​​ပေါင်းစားတာက ​​ကျန်းမာရေးနဲ့
ပိုညီညွတ်တယ်လို့ ​​ဖတ်ဖူးတယ်" ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
Simmer ​​ကတော့ ​​ရေဆူမှတ် ​​ရောက်ခါနီး ​​အပူချိန်မှာ ​​ချက်ပြုတ်ရေး ​​လုပ်တာကို ​​ပြောတာပါ။ ​​မီးအေးအေး ​​ဒါမှမဟုတ် ​​မီးမျှင်းမျှင်းနဲ့ ​​ချက်ပြုတ်တာကို ​​ဆိုလိုတာပါ။
ဥပမာ ​​- ​​Simmer ​​the ​​soup ​​for ​​20 ​​minutes. ​​လို့ပြောရင်'ဒီဟင်းချိုရည်ကို ​​မီးမျှင်းမျှင်းနဲ့ ​​မိနစ် ​​၂၀ ​​ကျိုချက်ပါ' ​​လို့ ​​ပြောခြင်း ​​ဖြစ်ပါတယ်။
အီတလီနိုင်ငံက ​​Elissabetta ​​Cecchina ​​က ​​since ​​more ​​than ​​ten ​​years ​​လို့ ​​သုံးလို့ရသလားလို့ ​​မေးလာပါတယ်။
ဟိုးတနင်္လာနေ့ကတည်းက ​​နင့်ကို ​​မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ ​​ပြောရင် ​​I ​​haven't ​​seen ​​you ​​since ​​last ​​Monday ​​လို့ ​​ပြောလို့ရပါတယ်။ ​​နောက်ဥပမာ ​​တစ်ခုကတော့ ​​- ​​The ​​kids ​​have ​​been ​​playing ​​in ​​the ​​tree ​​house ​​since ​​three ​​o'clock ​​လို့ ​​ပြောရင် ​​' ​​ကလေးတွေ ​​သစ်ပင်ပေါ်က ​​အိမ်ငယ်လေးမှာ ​​ကစားတာ ​​ဟိုး ​​သုံးနာရီကတည်းကပဲ ​​' ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ​​since ​​more ​​than ​​ဆိုတာကိုတော့ ​​သုံးလေ့မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ​​for ​​more ​​than ​​ဆိုတာမျိုးတော့ ​​သုံးလို့ရပါတယ်။
ဥပမာ ​​- ​​I ​​have ​​not ​​seen ​​her ​​for ​​more ​​than ​​10 ​​years. ​​လို့ပြောရင် ​​' ​​သူ့ကို ​​မမြင်ရတာ ​​၁၀ ​​နှစ်တောင် ​​ကျော်သွားပြီ" ​​လို့ ​​ပြောတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
လစ်ဗျားနိုင်ငံက ​​Fatimah ​​Alhumed ​​ကလည်း ​​a ​​fish ​​out ​​of ​​water ​​ရဲ့ ​​အဓိပ္ပာယ်ကို ​​မေးလာပါတယ်။
A ​​fish ​​out ​​of ​​water ​​ကို ​​တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင် ​​'ကုန်းပေါ်ကို ​​ရောက်နေတဲ့ငါး' ​​လို့ ​​ပြောရမှာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ​​a ​​fish ​​out ​​of ​​water ​​လို့ပြောရင် ​​ကိုယ်ကျင်လည်နေကျ ​​နေရာမှာ ​​မဟုတ်တဲ့အတွက် ​​မနေတတ် ​​မထိုင်တတ် ​​ကြောင်တောင်တောင် ​​ဖြစ်နေခြင်းပဲ ​​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​​- ​​He ​​has ​​always ​​lived ​​in ​​a ​​small ​​town. ​​He ​​is ​​like ​​a ​​fish ​​out ​​of ​​water ​​in ​​the ​​big ​​city. ​​လို့ပြောရင် ​​' ​​သူက ​​မြို့ငယ်လေးမှာပဲ ​​အမြဲတမ်း ​​နေထိုင်လေ့ရှိတဲ့အတွက် ​​မြို့ကြီးကို ​​ရောက်တဲ့အခါ ​​မနေတတ် ​​မထိုင်တတ် ​​ဖြစ်နေတယ်' ​​လို့ ​​ပြောသွားတာ ​​ဖြစ်ပါတယ်။ ​​
မှတ်ချက်များကို မော်ဒရေတာက စီစစ်ပြီးမှ ဖေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ချမှတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်း စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာဖို့သဘောတူပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။
ABC Radio Australia ကို ဝင်ရောက် လေ့လာရန်